नेपालमै पहिलो पटक क्लासिक टेकले ल्यायो १ जीबीपीएस इन्टरनेट, कति छ मूल्य ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
नेपालमै पहिलो पटक क्लासिक टेकले ल्यायो १ जीबीपीएस इन्टरनेट, कति छ मूल्य ?
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले नेपालमै पहिलो पटक एक जीबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यस अघि नै घोषणा गरिसकेको प्याकेज मङ्गलबार एक कार्यक्रमबीच बजारमा ल्याएको हो ।
यस अघि नेपालको सबैभन्दा उच्च गतिको इन्टरनेटको रुपमा वर्ल्डलिङ्कको ६०० एमबीपीएस गतिको प्याकेज रहेको थियो । उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेजलाई क्लासिक टेकले टायकनको नाममा ब्रान्डिङ गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार एक जीबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेजमा तीन ओटा आईपीटिभी समेत राखिएको छ । जसका लागि वार्षिक मूल्य ४७ हजार ९८८ रुपैयाँ राखिएको छ ।
यसको अर्थ वार्षिक प्याकेज खरिद गर्ने ग्राहकलाई यो प्याकेजमा मासिक तीन हजार ९९९ रुपैयाँ पर्नेछ । प्याकेजमा इन्स्टलेसन, एफटीटीएच केबल र डुअल ब्यान्ड फाइभजी राउटर निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।
यद्यपि राउटरका लागि ५०० रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्नेछ । साथै आईपीटिभी सेटटप बक्सका लागि समेत ५०० रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस बाहेक कम्पनीले ६२५ एमबीपीएस, ३२५ एमबीपीएस, २२५ एमबीपीएस र १५० एमबीपीएस गतिका अन्य प्याकेजहरू पनि ल्याएको छ ।
जसमा वार्षिक प्याकेज खरिद गर्ने ग्राहकले मासिक २४९९ रुपैयाँमा ६२५ एमबीपीएस, ३२५ एमबीपीएसका लागि १६४९ रुपैयाँ, २२५ एमबीपीएसका लागि १३९९ रुपैयाँ र १५० एमबीपीएसका लागि ११९९ रुपैयाँ मूल्य राखिएको छ ।
जसमा १५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटमा एउटा आईपीटिभी र बाँकी २२५ एमबीपीएस र ३२५ एमबीपीएसमा दुई ओटा आईपीटिभी र ६२५ एमबीपीएस प्याकेजमा तीन ओटा आपीटिभी दिनेछ ।